Ma Jecli VAR, Kumana Faraxsani Inaanu Sidan Ku Guuleysano – Tababare Mauricio Pochettino Oo Soo Bandhigay Niyad-jab Uu Ka Qaaday Ciyaartii Xalay – Cadalool.com
Ma Jecli VAR, Kumana Faraxsani Inaanu Sidan Ku Guuleysano – Tababare Mauricio Pochettino Oo Soo Bandhigay Niyad-jab Uu Ka Qaaday Ciyaartii Xalay
Tababaraha kooxda kubadda cagta Tottenham, Mauricio Pochettino ayaa sheegay in aanu la dhacsanayn isticmaalka qalabka garsoor caawiyaha VAR ee xalay sababta u noqday in kooxdiisu 1-0 kaga adkaato Chelsea.
Tottenham ayaa rikoodhe la siiyey markii uu goolhaye Kepa Arrizabalaga khalad ku galay weeraryahanka Harry Kane, waxaanu goolkaasi noqday midka kaliya ee ay labada kooxood kala dhaliyeen, hase yeeshee kulankan ka dhacay Wembley ayaa xooggaa hakad galay markii uu garsoore Michael Olivier la tashaday garsooreyaasha fadhiyey VAR oo uu ka doonayey inay ka caawiyaan haddii uu Harry Kane kusii jiray Offside ka hor intii aanay isgaadhin Kepa.
Michael Olivier ayaa garsooreyaasha VAR ay u sheegeen in aanu Kane ku jirin offside, waxaanu qaatay go’aanka ah inuu siiyo rikoodhe, laakiin xilli dambe ayaa Chelsea waxay soo bandhigtay muuqaallo ay ku caddaynayaan inuu ku jiray Offiside.
Horyaalka Premier League ayaa la filayaa in xili ciyaareedka dambe laga hir geliyo VAR, sannadkana waxa qaab tijaabo ah loogu isticmaalay FA Cup iyo Carabao Cup, laakiin tababaraha Tottenham, Mauricio Pochettino ayaa waxa uu sheegay in aanu la dhacsanayn isticmaalka VAR oo ay tahay in meelo badan laga hormariyo.
“Waxa aanu haysanaa lix bilood oo horumar lagu sameeyo, shaqo badanna way tahay in la qabto, laakiin anigu kuma faraxsani hadda, mana jecli inaanu sidan oo kale u guuleysano.” Sidaa waxa yidhi tababare Mauricio Pochettino.
Dhinaca kale, tababaraha Chelsea, Maurizio Sarri ayaa waxa uu sheegay in uu muuqaallada ka arkay Harry Kane inuu offside ku jiray ka hor intii aan qaladka lagu gelin.
“Daqiiqado ka hor ayaan daawaday muuqaalka kamaradahayaga. Wuxuu ahaa Offside. Kamaradahayagu waxay la sinnaayeen diilinta Harry Kane, waxaanu offside kula jiray madaxa iyo jilibka. Waxa muhiim ah in calan-wadeyaashu ay ordaan (la sinnaadaan ciyaartoyga ugu dambeeya).” Sidaas ayuu yidhi Sarri.